Margarekha » डुडुवा ५ नं. वडा कार्यालयको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी र वडाध्यक्ष प्रशुराम बुढाथोकीले सुयक्त रुपमा शिलान्यास
डुडुवा ५ नं. वडा कार्यालयको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी र वडाध्यक्ष प्रशुराम बुढाथोकीले सुयक्त रुपमा शिलान्यास
डुडुवा (बाँके), ४ चैत । बाँकेको डुडुवा गाँउपालिका ५ नं वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवनको निमार्ण कार्य शुरु भएको छ । नानापुरस्थित निमार्ण थालिएको भवनको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी र वडाध्यक्ष प्रशुराम बुढाथोकीले सुयक्त रुपमा शिलान्यास गर्नुभएको छ ।
भवनको शिलान्यास गर्दै गाँउपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नभएकाले दैनिक कार्यसंचालन गर्नमा समस्या भएपछि भवन बनाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यलयको भवनको सुविधा भएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहजतासंगै गुणस्तरियता बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधारसहित सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायत क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार गरी पालिकालाई नमूनाका रुपमा बनाउन गाउँपालिका लागि परेको बताउनुभयो ।
करिब तीन कठठा जग्गाको क्षेत्रफलमा निमार्ण हुन लागेको ५ कोठे भवनको निशान निमार्ण सेवा मुगुले ठेक्का लिएको गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख अधिकृत ओमबहादुर राना क्षेत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निमार्ण कम्पनीले एक वर्षभित्र भवन निमार्ण सम्पन्न गरि हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ । रु ८१ लाख ३३ हजारको लागतमा भवन निमार्ण हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
वडा कार्यलयको अहिले आफ्नै भवन नभएपछि नानापुरस्थित एक सामुदायिक विद्यालयको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको वडाध्यक्ष प्रशुराम बुढाथोकीले बताउनुभयो । ६ वटा वडा कार्यालय रहेको गाउँपालिका ५ वडा बाहेक सबै वडा कार्यलयको भवन रहेको छ । अहिले गाउँपालिकाको पनि भवन निमार्णको कार्य तिब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ ।